Cnaps Sport - ewa.mg
Kitra afrikanina: resin’ny FC Platinum ny Cnaps Sport
Tapitra hatreo ny lalan’ny Cnaps Sport, eo amin’ny fifaninanana afrikanina, taranja baolina kitra. Resin’ny FC Platinum avy atsy Zimbaboe, teo amin’ny lalao miverina, ry zalahy, teo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika. Nihintsana teo amin’ny lalao savaranonando, hiadiana ny ho tompondakan’i Afrika “Ligue des champions”, taranja baolina kitra, ny Cnaps Sport. Resin’ny FC Platinum zimbaboe, tamin’ny isa tokana 1 no ho 0, izy ireo, nandritra ny fihaonana miverina, notanterahina, omaly alarobia, tatsy Harare. Baolina tokana, tafiditr’i Rodwell Chinyengetere, teo amin’ny minitra faha-62. Niady hatramin’ny farany ny Cnaps Sport ary tena nampiseho endri-dalao nahafinaritra sy nahaliana ny mpijery zimbaboeanina. Betsaka ireo fanafihana sy ny baolina tokony ho tafiditry ny ekipa Malagasy, saingy tsy tao amin-dry zalahy mihitsy ny vintana. Niezaka nanindry ihany koa ny FC Platinum, ary nanao totoafo teo amin’ny fanafihana, saingy nahay sy tsara fipetraka hatrany i Leda, mpiandry tsatoby malagasy. Tsy nisy ny baolina tafiditra teo amin’ny fizaram-potoana voalohany. Niezaka nanafika hatrany ny Cnaps, teo amin’ny fidirana faharoa, saingy tsy nety nahafaty baolina mihitsy ry Lalaina sy ry Arnaud. Raha tsiahivina, 2 no ho 1, izany ny fitambaran’isa teo amin’ny ekipa roa tonta, teo amin’ny lalao mandroso sy miverina. Efa nisaraka ady sahala, 1 sy 1, ny roa tonta, nandritra ny lalao mandroso, natao teny Vontovorona, ny alahady 2 desambra lasa teo. Tapitra hatreo izany ny fifaninanana, ho an’ny Cnaps sport, ho an’ity taona 2018 ity. Tompondaka L’article Kitra afrikanina: resin’ny FC Platinum ny Cnaps Sport a été récupéré chez Newsmada.
Kitra afrikanina: samy miandrandra fandresena ny Cnaps sy ny Elgeco
KITRA – ARA-PIRAHALAHIANA :: Lavon’ny AS Adema ny ekipan’ny Cnaps Sport
Niondrika teo anatrehan’ ny ekipan’ny seranam-piaramanidin’i Madagasikara (AS Adema), tamin’ny isa 2 noho 1, ny alarobia lasa teo ny ekipan’ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana ara-tsôsialy (Cnaps Sport), nandritra ny lalao ara-pirahalahiana natrehan’izy ireo. Lalao noentina nanomanan’ ny ekipa tompondakan’i Madagasikara ny fifaninanana kaontinantaly hoatrehan’izy ireo amin’ny faramparan’ny volana novambra ity notanterahina teny amin’ny kianjan’i Vontovorona ity. Anaram-boninahitra fahe­nina ho an’ny Cnaps Sport no nalain’izy ireo tamin’ity taona ity ka nahatonga azy ireo indray hisolo tena an’i Mada­gasikara eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika. Raha tsiahivina dia ny ekipan’ny FC Platinium avy any Zimbaboe no hifanan­drina amin’ny Cnaps Sport amin’ny lalao savaranonandon’ny “CAF champions League”, izay hotanterahina eny amin’ny kianjan’i Vonto­vorona, amin’ny 27 na 28 novambra ny lalao mandroso. Any Zimbaboe kosa no hanaovana ny lalao miverina amin’ny 4 na 5 desambra ho avy izany. Mpilalao efatra mirahalahy, izay tompon-toerana ao amin’ny Cnaps Sport, no tsy niatrika an’izany lalao ara-pirahalahiana izany dia i Leda, Toby, Ando ary Mika. Voaantso any amin’ny eki­pam-pirenena malagasy hiatrika an’i Soudan izy ireo ka tsy afaka, araka ny fanazavan’ ny mpitantana ny ekipan’ny Cnaps Sport.